‘मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा गलत नहुने, ओलीले राम नेपा`लका हुन् भन्दा गलत हु`ने?? – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Political Views/‘मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा गलत नहुने, ओलीले राम नेपा`लका हुन् भन्दा गलत हु`ने??
‘मोदीले बुद्ध भारतका हुन् भन्दा गलत नहुने, ओलीले राम नेपा`लका हुन् भन्दा गलत हु`ने??
काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले श्रीरामको जन्म भूमी अ`योध्या नेपालमै पर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्ति लाई लिएर मिश्रित प्रति`क्रिया आइरहेको छ। केहिले ओलीको यस किसिमको अभिव्यक्तिले नेपाल-भारतको सम्बन्ध बिगार्ने बताइरहेका छन् भने केहिले ओलीको अभिव्यक्तिलाई समर्थन गर्दै वास्तविकता बारे अनुसन्धान गरिनुपर्ने बताइरहेका छन्।
सोमबार भानुजयन्तीका अवस`रमा आयोजित कार्य`क्रममा बोल्दै रामको जन्म भूमी अयोध्या नेपालको वीरगञ्ज भन्दा केही पर ठो`रीमा पर्ने बताएका थिए। भारतले विवा`दित अयो`ध्या खडा गरेको र सांस्कृ`तिक अतिक्रमण गरेको ओलीको भनाई थियो।
ओलीको यस अभिव्यक्ति बारे भारतमा विरोध भैरहेको छ। यता नेपालका विभिन्न राजनीतिक नेताहरुले पनि ओलीको आलोचना गरिरहेका छन्। तर, केहि भने ओलीले भने जस्तै अयोध्या नेपालमै पर्ने त`थ्यहरु भेटिन सक्ने बताउँ`छन्।
“केपी शर्मा ओलीले अयोध्या वीरगन्ज देखि पश्चिममा पर्छ र राम नेपालका छोरा हुन् भन्दा उनलाई उल्लि बिल्ली पारिँदै छ । हामीलाई ओली महो दयको यो कुरा नयाँ लाग्नु स्वाभाविक हो । ठोरी गएर अध्ययन गरौँ न भन्नुभन्दा पनि हामीलाई ओली महोदयले अन्टसन्ट कुरा गरेर कालापानीको मुद्दालाई कमजोर पारे भनेर गफ हाँक्न रमाइलो लागेजस्तो छ ।”,नेपाल आफ्नो धारणा फेसबुकमा राख्छन्। ओलीले अयोध्याको दाबी गरेर भारतसँग यु-द्धको नयाँ मोर्चा खोलेको उनको तर्क छ।